Diyaaradaha dagaalka Yuhuuda oo duqeeyay garooon diyaaradeed milatari oo kuyaala duleedka magaalada Dimishiq ee gudaha Suuriya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldDiyaaradaha dagaalka Yuhuuda oo duqeeyay garooon diyaaradeed milatari oo kuyaala duleedka magaalada Dimishiq ee gudaha Suuriya
January 13, 2017 Abdi Omar Bile World 0
Diyaaradaha dagaalka Yuhuuda oo duqeeyay garooon diyaaradeed milatari oo kuyaala duleedka magaalada Dimishiq ee gudaha Suuriya. [Sawirka: Archive]
Dimishiq-(Puntland Mirror) Diyaaradaha dagaalka Yuhuuda ayaa bartilmaameedsaday garooon diyaaradeed milatari oo kuyaala duleedka magaalada Dimishiq, sida ay ku warantay wakaalada wararka dowladda Suuriya ee (SANA) maanta oo Jimce ah.
SANA oo soo xiganaysa ilo-wareedyo milatari ayaa sheegay in dhowr gantaal ay diyaaradaha Yuhuudu ku dhufteen garoonka milatari oo la dhaho Mazzeh.
Lama oga in khasaare ay duqayntaas ka dhalatay, bale waxaa halkaas gaaray baabuurta gurmadka deg-dega ah.
Wali kama aysan hadlin saraakiisha Yuhuuda duqayntaas ay diyaaradahoodu ka geysteen gudaha Suuriya.
Waa markii saddexaad dhawaan oo Yuhuuda ay duqaymo ka geystaan gudaha Suuriya, sida ay sheegtay dowladda Suuriya.